Kuyini Ukusakazwa ku-Forex - Spread in Forex Ukuhweba Kuchazwa
Imfundo - Imibhalo nezifundo - izihloko ezisekelwe ngaphambili - Kuyini ukusabalala e Forex Ukuhweba?
Ukusakazwa kungenye yamagama asetshenziswa kakhulu emhlabeni we-Forex Ukuhweba. Incazelo yomqondo ilula impela. Sinezintengo ezimbili ngohlobo lwemali. Enye yazo intengo yeBida kanti enye yintengo ye-Ask. Ukusakazeka ngumehluko phakathi kweBid (intengo yokuthengisa) ne-Ask (intengo yokuthenga).
Ngokubuka kwebhizinisi, ababhulashi kufanele benze imali ngokumelene nezinsizakalo zabo.
Abathengi benza imali ngokuthengisa imali kubathengisi ngemali engaphezu kwaleyo abayikhokhela ukuze bayithenge.
Abathengi futhi benza imali ngokuthenga imali kubathengisi ngemali engaphansi kwalokho abakhokha ukuyithengisa.
Lo mehluko ubizwa ngokuthi ukusabalala.
Kusho ukuthini ukusakazeka?
Ukusabalala kukalwa ngokwemibandela yamaphawu okuyinto encane yokuhamba kwentengo yohlobo lwemali. Ilingana ne-0.0001 (iphuzu lesine ledesimali ngentengo yesilinganiso). Lokhu kuyiqiniso kwababili abakhulu ngenkathi abesilisa nababili abangamaJen Yen benephuzu lesibili njengepayipi (0.01).
Lapho ukusabalala kubanzi, kusho ukuthi umehluko phakathi kwe- “Bhida” ne- “Buza” uphezulu. Ngakho-ke, isimo esishubile sizoba sikhulu futhi imali ekhokhwayo izobe iphansi. Ngakolunye uhlangothi, ukusabalala okuphansi kusho ukungazinzi okuphansi kanye nokuthengiswa kwemali ephezulu. Ngakho-ke, izindleko zokusabalalisa zizoba zincane lapho umhwebi ehweba a lwemali pair ngokusabalala okuqinile.
Iningi lababili bezezimali abanekhomishini yokuhweba. Ngakho-ke ukusakazwa ukuphela kwendleko abaholi okufanele bathwale. Iningi labathengi be- forex abakhokhisi ikhomishini; ngakho-ke, bayazuza ngokwandisa ukusakazeka. Ubungako bokusabalalisa buncike ezintweni eziningi njengokuqina kwemakethe, uhlobo lomthengisi, i-currency pair, njll.
Ukusakazeka kuncike kuphi?
Isikhombi sokusakazeka sivame ukwethulwa ngesimo sejika egreyini elibonisa ukuqondiswa okusakazeka phakathi kwamanani "Buza" ne "Bhidi". Lokhu kungasiza abathengisi ukubona ngeso lengqondo ukusakazeka kombhangqwana wemali ngokuhamba kwesikhathi. Amabhuthi we-liquid amaningi kakhulu asakazeka ngokuqinile ngenkathi ngababili abangaphandle benokusakazeka okubanzi.
Ngamazwi alula, ukusatshalaliswa kuncike ekuwebeni kwemakethe kwensimbi yezezimali enikeziwe, okusho ukuthi inzuzo ephezulu yohlobo oluthile lwemali, incane ukusakazeka. Isibonelo, i-EUR / USD pair ngumbhangqwana othengiswa kakhulu; Ngakho-ke, ukusakazeka okubhangqa kwe-EUR / USD kuyinto ephansi kunazo zonke ezinye izimbhangqwana. Bese kuba namanye amabhangqwana amakhulu afana ne-USD / JPY, i-GBP / i-USD, i-AUD / i-USD, i-NZD / i-USD, i-USD / i-CAD, njll. Esimweni samabili angaphandle, ukusabalala kukhulu izikhathi eziphindwe kabili uma kuqhathaniswa namabili amakhulu futhi lokho konke ngenxa ye-liquidity emincane ngamabili angaphandle.
Noma yikuphi ukuphazamiseka kwesikhashana kwezezimali kubonakaliswa ekusakazekeni. Lokhu kubhekisa ezimweni ezinjengokukhishwa kwemininingwane emincane kakhulu, amahora lapho izinguquko ezinkulu emhlabeni zivaliwe, noma ngamaholide amakhulu asebhange. Ukuqina kwensimbi kuvumela ukunquma ukuthi ukusakazeka kuzoba kukhulu noma kukuncane.
- Izindaba zezomnotho
Ukuwohloka kwemakethe kungathinta ukusakazeka kwe forex. Isibonelo, ababili bezimali bangathola ukunyakaza kwentengo yasendle lapho kukhululwa izindaba ezinkulu zezomnotho. Ngakho-ke, ukusakazeka kuyathinteka futhi ngaleso sikhathi.
Uma ufuna ukugwema isimo lapho ukusakazeka kudlula kakhulu, khona-ke kufanele unake ikhalenda lezindaba ze-forex. Kuzokusiza ukuthi uhlale unolwazi futhi ubhekane nokusakazeka. Njengedatha yokukhokha engeyona esepulazini yase-US iletha ukwehla okukhulu emakethe. Ngakho-ke, abathengisi bangahlala bengathathi hlangothi ngaleso sikhathi ukunciphisa ubungozi. Kodwa-ke, izindaba ezingalindele noma idatha kunzima ukuphatha.
- Ukuhweba ivolumu
Izimali ezinevolumu ephezulu yokuhweba ngokuvamile ukusabalala okuphansi njengama-USD ngazimbili. Lezi zibhangqwana zinezimali eziphezulu kodwa namanje lezi zibili zinengozi yokwanda ukusabalala phakathi kwezindaba zezomnotho.
- Ukuhweba amaseshini
Ukusakazeka kungenzeka ukuthi kuhlale kuphansi ngesikhathi semakethe ezinkulu njengezifundo zaseSydney, New York neLondon, ikakhulukazi lapho amaseshini eLondon naseNew York agcwele noma iseshini yaseLondon iphela. Ama-Spreads nawo athinteka ekufunweni okujwayelekile kanye nokunikezwa kwemali. Ukufunwa okuphezulu kwemali kuzoholela ekusakazekeni okucishe kube.
- Ukubaluleka kwemodeli yomthengisi
Ukusakazeka kuncike kwimodeli yebhizinisi yomthengisi.
Abenzi bemakethe ikakhulukazi bahlinzeka ngokusakazwa okuhleliwe.
In the Imodeli ye-STP, kungaba ukusabalalisa okuguquguqukayo noma okungaguquki.
In Imodeli ye-ECN, sisakazeke kuphela emakethe.
Zonke lezi zinhlobo zama-broker zinezinzuzo nezinzuzo zazo.
Yiziphi izinhlobo zokusabalala eziku-Forex?
Ukusabalala kungalungiswa noma kuguqulwe. Njengokuthi, ama-indices asakazekele ukusakazeka kakhulu. Ukusakazwa ngabhangqa be-Forex kuyahluka. Ngakho-ke, lapho ibhidi bese ubuza amanani eshintsha, ukusakazeka nakho kuyashintsha.
1. Ukusabalala okungaguquki
Ukusabalala kusethelwa ngabathengi futhi abaguquki ngaphandle kwezimo zemakethe. Ingozi yokuphazamiseka kwe-liquidity ingasohlangothini lomthengisi. Kodwa-ke, ama-broker agcina ukusabalala okuphezulu kulolu hlobo.
Umakhi Wezimakethe noma abathengisi bamatafula abadayisi banikezela ngokusakazwa okuhleliwe. Abathengisi abanjalo bathenga izikhundla ezinkulu kubanikezeli be-liquidity bese benikeza lezo zikhundla ngezingxenye ezincane kubathengisi abathengisayo. Abathengi empeleni benza njengokuphikisana nokuhweba kwamakhasimende abo. Ngosizo lwedeski elisebenzayo, abathengisi be-forex bayakwazi ukulungisa ukusakazeka kwabo njengoba bekwazi ukulawula amanani aboniswa kumakhasimende abo.
Njengoba intengo ivela emthonjeni owodwa, ngakho-ke, abathengisi bangabhekana nenkinga yabaceli njalo. Kunezikhathi ezithile lapho amanani entengo yemali ngazimbili eshintsha ngokushesha phakathi kokuqina okukhulu. Njengoba ukusabalala kuhlala kungashintshiwe, umthengisi ngeke akwazi ukwelula ukusakazeka ukuze avumelane nezimo zemakethe zamanje. Ngakho-ke, uma uzama ukuthenga noma ukuthengisa ngenani elithile, umthengisi ngeke avume ukubeka i-oda kunalokho umthengisi uzokucela ukuthi wamukele inani elifunwayo.
Umlayezo ofaka isicelo uzokhonjiswa esikrinini sakho sokuhweba ukukwazisa ukuthi intengo ihambile futhi uma uvuma ukwamukela intengo entsha noma cha. Kakhulu inani elibi kakhulu kunentengo yakho yoku-oda.
Lapho izintengo zihamba ngokushesha okukhulu, ungahle ubhekane nenkinga yokuncipha. Umthengisi kungenzeka angakwazi ukugcina ukusakazwa okuhleliwe futhi intengo yakho yokungena ingahluka kunentengo yakho okuhlosiwe.
2. Ukusabalalisa Okuguquguqukayo
Kulolu hlobo, ukusakazwa kuvela emakethe kanti umthengisi ukhokhisa izinsizakalo zakhe ngaphezulu kwawo. Kulokhu, umthengiseli akanangozi ngenxa yokuphazamiseka kwe-liquidity. Abathengisi bavame ukujabulela ukusakazeka okuqinile ngaphandle kokunyakaza okuthe xaxa kwemakethe.
Ama-desk broker angasebenzi nikeza ukusabalala okuguqukayo. Abathengisi abanjalo bathola izingcaphuno zabo zamanani wamabhangqa emali kubanikezeli abaningi bezimali futhi abathengisi be-theses badlulisela amanani ngqo kubahwebi ngaphandle kokungenela kwedeski elisebenzelana nalo. Kusho ukuthi abanakulawula ukusabalala nokusabalala kuzokhula noma kwehle ngokuya ngokuntengantenga okuphelele kwemakethe nokunikezwa nokufunwa kwemali.
Ukuqhathanisa kokusabalala okungaguquki nokuguquguqukayo
Ezinye izinzuzo nobubi bokusakazeka okungaguquki kuyaxoxwa ngakho ngezansi:
Ezinye zezinzuzo kanye nezithiyo zalezi zinhlobo ezimbili zokusabalala zichaziwe ngezansi:
Kungenzeka ube nezicelo
Ubungozi bezicelo abukho
Izindleko zokwenziwa zingabikezelwa
Izindleko zokuthengiselana azivame ukubikezelwa njalo
Isidingo esikhulu sincane
Imfuneko yenhloko inkulu kakhulu.
Ilungele abathengisi abathuthukile
Imakethe eguquguqukayo ayithinti ukusakazeka
Ukusakazeka kungakhula ngezikhathi zokuwohloka okuphezulu
Ukusakazeka kukalwa kanjani ekuhwebeni kwe-Forex?
Ukusakazwa kubalwa ngaphakathi kwesilinganiso sentengo ngenani elikhulu lokugcina lokubuza nentengo yebhidi. Izinombolo ezinkulu zokugcina zingu-9 no-4 esithombeni esingezansi:
Kufanele ukhokhe ukusabalalisa kuqala ukuthi uhweba nge-CFD noma usabalalisa i-akhawunti yokubheja. Lokhu kuyefana nekhomishini yabakhokhi abakhokha ngenkathi ukuhweba kwabelana ngamaCFD. Abadayisi bakhokhiswa ukungena nokuphuma kokuhweba. Ukusakazeka okunamandla kuyathandeka kakhulu kubahwebi.
Ngokwesibonelo: Inani lentengo lebhokisi le-GBP / JPY lili-138.792 ngenkathi intengo yokucela ingu-138.847. Uma ukhipha i-138.847 kusuka ku-138.792, uthola u-0.055.
Njengoba inani elikhulu lokugcina lesilinganiso samanani liyisisekelo sokusakazeka; ngakho-ke, ukusabalala kuyalingana nama-pips ayi-5.5.
Buyini ubudlelwano bemashi nokusakazeka?
Ungaba nengozi yokuthola wekhasi shayela uma i-forex isakazeka kakhulu futhi isimo esibi kakhulu, izikhundla ziyaqedwa ngokuzenzakalela. Noma kunjalo, ucingo lwemajini lwenzeka kuphela lapho inani le-akhawunti lehla ngaphansi kwesidingo semikhawulo engu-100%. Uma i-akhawunti ifinyelela ngaphansi kwesidingo esingu-50%, zonke izikhundla zakho zizokhishwa ngokuzenzakalela.
Ukusabalala kwe-Forex ngumehluko phakathi kwentengo yokubuza nentengo yebhidi ye- Umbhangqwana we-Forex. Imvamisa, kukalwa ngamaphips. Kubalulekile ukuthi abathengisi bazi ukuthi yiziphi izinto ezithinta ukwehluka ekusakazekeni. Izimali ezinkulu zinevolumu ephezulu yokuhweba; yingakho ukusabalala kwazo kuphansi ngenkathi ngazimbili exotic zisakazeke kabanzi phakathi kwempahla ephansi.